Isa purinda yako pane iyo itsva OS X neGutenprint | Ndinobva mac
Pedro Rodas | | OS X Yosemite, Zvimwe Zvirongwa zveMac
Nezvose zvinozivikanwa uye kana isu tisipo pano ini ndiri kubva kuMac kuti ndikuudze, kuti imwe yemabhenefiti eOS X kubvira payakatanga ndiyo nyore iyo iwe yaunogona kuisa mitezo yakaita se maprinta. Tinofanira kungoibvisa kubva mumapakeji ayo, batanidza iyo mains uye pakupedzisira ubatanidze USB tambo kune Mac.
Iyo komputa inokurumidza kukuzivisa iwe kuti nyowani purinda yakawanikwa uye kuti inoenderera nekuiisa. Izvi zvinodaro nekuti Apple inogara ichishanda mukuwedzera maprinta modhi kune dhatabhesi, kuitira kuti iyo nguva yatinobatanidza kune yedu Mac, inozviona uye inotsvaga yega vatyairi.
Zvisinei, maitiro aya haasi nyore nguva dzose uye ini pachangu ndakazviwana ndiri mumamiriro ezvinhu umo kunyangwe kubatanidza iyo printa kuburikidza neUSB, iyo system haina kuiona pane nhunzi. Kune ino mamiriro, maitiro anosiyana zvishoma uye isu tinongofanirwa kupinda Sarudzo dzeSystem> Printers uye Scanners uye tinya pachikwangwani "+", mushure meizvozvo isu tichaona zvechokwadi mune iyo rondedzero iyo iyo printer iyo yatakabatanidza inoonekwa mune iyo runyorwa.
Nyore, handiti? ... Zvakanaka, zvinoitika kuti kuchine mamiriro ezvinhu atisina kutaura nezvawo. Ko kana iyo database yeApple isina iyo mutyairi yeiyo printer? Muchikamu chino tinokuudza zvekuita uye kupedzisa kuisa yako yekare purinda.
Iyo haigare ichifanirwa kuve inodhinda kubva panguva yemadinosaurs. Kungoti iyo OS X painoshanduka, mamwe mamodheru ari kuraswa kuitira kuti hwaro hurambe huri hwazvino sezvinobvira. Apple ichave mune yayo dhatabhesi iyo vatyairi iyo makambani ekudhinda anogadzira iyo OS X system, saka kana, semuenzaniso, Kodak, Canon, kana HP inomira kugadzira imwe mutyairi yeiyo, semuenzaniso, OS X Yosemite, Iwe hauchakwanise kuiisa nenzira yakapusa.
Kugadzirisa dambudziko iri tinopa Gutenprint. Chimwe chezvinhu chinoita kuti OS X ive nesimba isimba reLinux rainaro, saka tinogona kufungidzira kuti mhinduro yedambudziko redu inogona kuvapo kubva kuLinux. Yakati uye yaitwa, Gutenprint iseti ye vatyairi chechitatu-bato kumisikidza akasiyana mamodhinda emaprinta kubva kwakasiyana vagadziri
Zvakanakisa pane zvese ndezvekuti pane chaizvo vhezheni yeichi chishandiso cheOS X, saka zvese zvaunofanirwa kuita kutarisa kana iyo purinta yaunoda kuisa iri pane irondedzero. Kushanda kwayo kuri nyore. Paunowana nekuisa iyo mutyairi muprinta uye gare gare unoibatanidza, iyo OS X system inoona maprinta maviri, imwe iine mutyairi Gutenprint uye imwe isina mutyairi.
Isu tinosarudza iyo inoonekwa neGutenprint, tinopedzisa kuiisa uye voila, iwe unotova neyako yekare purinda yakagadzirira. Unogona kuona iyo Gutenprint app Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X Yosemite » Isa purinda yako pane OS X nyowani neGutenprint kana pasina madhiraivha ayo
Mhoro, ini ndine aricoh hofisi p100 SU uye neichi chishandiso handigone kuitora, pane chero nzira yekuisa mutyairi?
Pindura kuna jaleotv
OSX haina Linux base, hwaro hwayo ndiFreeBSD, inova UNIX.
Kuenderera mberi Kuvandudza Chishandiso cheNhaka Macs ikozvino inotsigira Bluetooth 4.0